PHD N'ime ndị ọrụ ebere Africa - CAPSI
Kpalie ndị ọzọ na akụkọ gị
PDM na ngalaba nke Philanthropy & Resource Mobilisation
MM na African Philanthropy
MM Site Nchọpụta
PhD na African Philanthropy
Okwu Mmalite Fedha maka Asambodo Philanthropy
Asambodo Dhahabu Advanced Philanthropy
Asambodo onye isi ala Almasi
Okwu Mmalite nke African Philanthropy
Na-ewebata ihe atụ ntọala Community
Ụkpụrụ & Isi mmalite nke inye ego
Ọrụ Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ & Azụmahịa Na Society
Ego maka Social Enterprises & NGO
Ọchịchị Liquid na narị afọ nke 21
Nyocha Intl nke Philanthropy & Social Investment
Akwụkwọ akụkọ Mpịakọta 1
Akwụkwọ akụkọ Mpịakọta 2
Mkparịta ụka na Pọdkastị Philanthropy Africa
Mmemme WBS PhD bụ nke kachasị na South Africa yana otu n'ime ndị a kacha asọpụrụ na kọntinent ahụ. Anyị na-achọ ma na-akpọkọta ndị na-aga ime elu si n'ofe Africa iji lebara isiokwu dị mkpa na nyocha PhD ha nke dị mkpa maka ọganihu azụmahịa na ọha mmadụ na kọntinent anyị.
Dịka nwa akwụkwọ nke mmemme PhD anyị, ị ga-enweta ezigbo nghọta ọdịnala na mmekọrịta ọha na eze site na arụmụka azụmahịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ị ga-eme ka ikike ikwupụta okwu, too na ntụkwasị obi wee ghọta oke ngalaba ihe ọmụma ị nwere ike ịmụta site n'ịzụlite mmụta gị na nkà nyocha.
Ihe ndị a bụ ihe ntinye chọrọ maka mmemme a
Nzere bachelọ na nsọpụrụ - klas nke abụọ ma ọ bụ karịa ma ọ bụ nzere bachelọ yana diploma diploma
Ugo mmụta nna ukwu nwere nkezi “B” ma ọ bụ mkpesa ka mma yana 70% ma ọ bụ karịa maka mkpesa nyocha MBA.
Nkọwapụta nke nyocha gị chọrọ.
Ịnweta onye nlekọta kwesịrị ekwesị
Atụmatụ nwere peeji iri na abụọ
Ndekọ akwụkwọ / ndekọ agụmakwụkwọ enwetara aka - Undergraduate, Honors and Masters Degree
Asambodo agụmakwụkwọ akwadoro - Undergraduate, Honors na Masters Degree
1 - 2 afọ
124 350.00 ZAR
15 000.00 ZAR (na-akwụ ụgwọ site na ụgwọ akwụkwọ)
A ga-atụgharị gị gaa na ibe ngwa ntanetị nke Mahadum Witwatersrand. Biko soro ntuziaka ndị e depụtara na ibe ahụ.
Tee UGBU A
PDM N'ime Ọkachamma & Nchikota akụrụngwa
MM Na Afrịka Philanthropy
Usoro isiokwu nyocha
Idenye aha na anyị ala
Ikike niile echekwabara © 2022
Budata akwụkwọ akụkọ ahụ
Dejupụta nkọwa gị ka ibudata akwụkwọ akụkọ gị ugbu a!
Ụlọ ọrụ Charles Mott Foundation
Onye ọsụ ụzọ ụgbọ ala, onye enyemaka, na onye ndu n'ime obodo, Charles Stewart Mott lekọtara maka ihe ọhụrụ, izi ezi, na obodo. Site n'ịrụ ọrụ na ụwa ebe ụdị ndụ onye ọ bụla jikọtara ya na ọdịmma obodo, ma mpaghara ma n'ụwa nile, Charles Stewart Mott Foundation na-aga n'ihu na nketa a.
Onye tọrọ ntọala nke Center, Charles Stewart Mott Foundation kwadoro nguzobe nke oche ma na-aga n'ihu na-akwado mmemme anyị.